Indian Online Casino Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
Loading ... Mitemo ine chokuita nekubhejera muIndia haina kunyatsotsanangurwa. Nzira dzakasiyana-siyana dzekubhejera munyika dzakanyatsorambidzwa sezvinoitwa mutemo webhejeri we1867 inorambidza basa kana kushanyira makasinos uye zviduku zvidhinha kana kuti jeri nguva.
Parizvino, nyika haina mutemo wakajeka pakubhejera. Kutamba zviri pamutemo muIndia kunogona kungova mumatunhu matatu: Sikkim, Goa uye Daman. MuGoa pane manomwe epasi-akavakirwa makasino ayo anonyanya kuiswa slots michina. Mitambo yemabhodhi iripo mumashanu kasino cruise mumahombekombe erwizi Mandovi uye pasi-based makasino muSikkim.
Munguva pfupi yapfuura, muna August 2016, muMacau yakavhura casino inodhura zvikuru munyika yose Wynn Palace, iyo yakavaka mari yekuvaka mumabhuku ekuvakwa kwekakinisi uye yakaita madhora emadhora ane 4.2. Pane bhoterti, asi mune dzimwe dzakawanda ivo vanorambidzwawo mumaguta mashanu eIndia. Mitambo Kubhadhara zvishoma zvishoma, izvo zvaifungidzirwa semutambo wemhizha neDare Repamusorosoro mu1996.
Rwokutanga rwe10 Indian Online Online Casino Sites
Sezvo hurumende isingape rezinesi rekushandisa nzvimbo pamhepo kubhejera muIndia, nyika zvakare mitemo yeututstvuetyut yakanangana nekutengesa internet. Sezvo kubhejera kwepasirese kwakarambidzwa munzvimbo zhinji dzeIndia, vazhinji vanotenda kuti izvi zvinoshandawo kubhejera kuri online. Asi hapana kuomarara mutemo munzvimbo ino, izvo zvinodzivirira vabhejeri veIndia kutamba online, saka vanozviita nguva dzese.
Parizvino, Sikkim ndiyo chete dunhu reIndia, iyo inoshanda musika wakatarwa wekubhejera pamhepo, uye muzhizha 2015 yakavhura yekutanga webhusaiti online kubheja mitambo muIndia. Sikkim zvakare mutungamiri uye neSikkim Super Lotto yake. Yakavambwa mu2002, iyo rotari ichiri iyo chete ine marezinesi emunharaunda ekubhejera nzvimbo munyika.
Kunyangwe paine fungidziro mukana wekupa marezenisi emhando dzakasiyana dzekubhejera uye kubheja zvemitambo zvinoenderana nemutemo wekubhejera online Sikkim (2008) nemirau yekutamba pamhepo Sikkim (2009), hapana mumwe wevashandisi haasati apihwa rezinesi rakazara. Naizvozvo, vatambi veIndia vanofarira mutambo we poker uye bingo, kubheja zvemitambo uye makasino epamhepo vanomanikidzwa kushandisa vekunze nzvimbo dzekubhejera.
Panguva imwecheteyo, ondiyskie vanobhejera vane hunyanzvi mukuvhura kwenzvimbo tichitarisa chokwadi chekuti mashandisirwo emari pakati pevagari veIndia nenzvimbo dzekunze dzekubhejera dzakarambidzwa kubheja kwepamhepo muIndia. Muna Chivabvu 2011, India yakatora mutemo wezvematongerwo enyika pahunyanzvi hweruzivo, uhwo hunosanganisira zvirevo zvekudzivirira kubhejera online uye zvinopa vatambi vepaInternet basa rekudzivirira nzvimbo dzekubheja pamhepo pamitambo.
Sites online casino inobvuma vatambi vanobva kuIndia
Ona runyorwa rwepamhepo kasino nzvimbo dzinogamuchira vatambi vanobva kuIndia, uye vachipa mhando yepamusoro uye yakachengeteka mitambo. Pano iwe unowana zvakasiyana siyana zvevaraidzo kubva kune slot michina kune kasino mitambo inorarama kubva kune vakakurumbira software vatengesi seNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, nevamwe vazhinji.
Iwe unogonawo kuverenga kuongororwa kwedu kwepaInternet sites, kuti uzive zvakanakisa kutengeswa kwepaIndaneti, mabhonasi uye maikwereti okubhadhara anowanikwa kune vatambi vanobva kuIndia.
0.1 Rwokutanga rwe10 Indian Online Online Casino Sites
2.1 Kubhejera muIndia
2.2 Sites online casino inobvuma vatambi vanobva kuIndia
yemahara slot kasino mitambo yekunakidzwa